Lukaku Oo Guul Ku Hoggaamiyey Chelsea Iyo Juventus Oo Karbaashtay Malmo - Laacib
HomeWararka Champions LeagueLukaku Oo Guul Ku Hoggaamiyey Chelsea Iyo Juventus Oo Karbaashtay Malmo
Lukaku Oo Guul Ku Hoggaamiyey Chelsea Iyo Juventus Oo Karbaashtay Malmo
Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa guul dirqi ah ku bilaabatay xilli ciyaareedka cusub ee 2021-22 ee Champions League ee ay koobkiisa difaacanayso, waxaanay 1-0 kaga badiyeen Zenit St Petersburg oo waqti dambe uu gool madax ah ka dhaliyey Romelu Lukaku.
Blues oo garoonkeeda Stamford Bridge ku qaabbishay Zenit ayaa waxay awoodi weyday inay shabaqa soo taabato illaa laga gaadhayay daqiiqaddii 69aad, markaas oo kubbad uu dhinaca midig kasoo tuuray Cesar Azpilicueta uu madax ku qabtay Romelu Lukaku oo dhinaca midig ee goolhayaha oo hoosta ah ka geliyey goolka, sidaas ayaanay Chelsea ku heshay saddexda dhibcood iyo jawi fiican oo ay ku bilaabatay horyaalka Yurub.
Tababare Thomas Tuchel ayay kooxdiisu fursado heshay labadii qaybood ee ciyaarta, waxaana xusid mudan in dhamaadkii uu Lukaku goolhayaha ula tegay kubbad laakiin uu difaac isku soo tuuray lugta u dhigay oo koorne ay ka noqotay.
Chelsea oo ay gubaysay xusuusta xun ee dhacdadii sannadkii 2012 ee markii ay koobka Champions League ku guuleysteen ay xilli ciyaareedkii xigay ku hadheen wareegga hore ee Group-yada, ayaa waxay halgan u gashay sidii ay guul iyo jawi wanaagsan ugu bilaaban lahaayeen, iyagoo waliba arkayay Juventus oo ay isku Group yihiin oo qaybtii hore guul xaqiijisatay.
Zenit oo haysatay ciyaartooyo dardar badan ayaa waxay goolka Chelsea toogatay 14 jeer waxaana halgan la galay goolhaye Eduard Mendy, taas oo muujinaysa in ay ahaayeen koox aan u qalmaynin inay guul-darraysato.
Si kastaba, Chelsea ayay guushu ku raacday 1-0, waxaanay ku jirtaa kaalinta labaad ee Group H, waxaana ka horreysa Juventus oo 3-0 ku burburisay kooxda reer Norway ee FC Malmo oo qaybtii hore ay goolasha ka dhaliyeen.
Alex Sandro ayaa Juventus u furay gool-dhalinta, waxaana mid labaad oo rikoodhe ahaa ku daray Paulo Dybala oo qaatay masuuliyadihii Cristiano Ronaldo, halka uu goolka saddexaadna raaciyey Alvaro Morata ka hor intii aan loo bixin waqtiga nasashada.
Malmo FF ayaa la dhahaa waa kooxda ugu guulaha badan SWEDEN maaha Norwey